Jen. Indhaqarshe: Alshabaab guul ma gaarayaan oo nin gardaran ma guuleysto – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed Gen. Daahir Aadan Cilmi “Indhaqarshe” oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xarunta wasaaradda gaashandhiga ayaa ka hadlay qarax shalay lagula begsaday Muqdisho, kaasoo uu ka badbaaday.
Gen. Indhaqarshe ayaa sheegay in qaraxa miino ee lala beegsaday aysan wax khasaare ah kazoo gaariga isaga iyo ciidamada la socoday.
“Qaraxaas waan ka bad baaday, wax i gaaray ma lahan askarteyda iyo ciidanka ila socday waxba ma gaarin alle mahadiis weeye, ayaga ku qasaari doono, waxaa la yiri nin gardan ma guuleysto wey naga gardaran yihiin, anaga iyo ayaga waxaa kala joognaa labo gees oo aad u kala fog” ayuu yiri Jen. Indho-Qarshe oo la hadlay warbaahinta.
Taliyaha milateriga Soomaaliya Gen, Indha-qarshe ayaa ku eedeeyey hogaamiyaha Alshabaab inuu dalka Soomaaliya keenay dhaqaanno aad u fool xun.
“Godane iyo dadkiisa waxay wadaan wax aad iyo aad u fool xun weeye, taariikh mugdi ah oo anay horay u soo marin ayay dadka Soomaaliyeed ku abuureen ayaga waa laga dulqaadi doonaa, dadkana waxaan leeyahay la shaqeeya ciidanka” ayuu sidoo kale Gen. Indha-qarshe.
Gen. Indhaqarshe ayaa sheegay in ciidamadu ay weli ku gudajiraan howlgalkooda ay kula dagaallamayaan Al-Shabaab, isagoo xusay ciidanku awood buuxda u leeyihiin soo afjarida Alshabaab.
Qarax miino oo shalay lala beegsaday gawaari uu la socday Gen. Indha-qarshe ayaa waxaa sheegtay Alshabaab, iyadoo Abuu Muscab oo u hadlay Alshabaab uu xusay in sababta ay Indha-qarshe y beegsadeen tahay inuu bixiyo amarrada ciidamada dowladdu ku dhibaateeyaan shacabka sida uu hadalka u dhigay.
Wasirrada Somalia oo ansixiyey Guddiga Madaxa bannaan ee Dib-u-eegista Dastuurka